Kagase daran Daarood ku xaar dayrta maanta ahe
Hays dul yaalo meeydkoodu waa doqon abaalkeede
BOGGANI WELI WAA QABYO
:: Khaliif Maruuryo
:: Dhaxbaaxo jin
:: Maxamud Dheeg
:: Cabdille Raage
:: Wiil Hawiye
:: Cali "Banfas"
:: Cali C. Afyare
:: Dharbaaco Jin
:: Aadan Cabdi Axmed
Waa faalo Kooban oo ku saabsan Tixdii uu ninka Majeerteen Bilaabay 1978 kii iyo sidii Abwaannada Soomaliyeed uga jawaabeen gabaygii Calaacalka ahaa ee Khaliif Sh Muxumed. Gabayga waxa ka jawaabay rag ay ka mid yihiin Dharbaaxo Jin, Maxamud Dheeg, Cali Xasan Aadan (banfas), Cabdulle Raage, Cali C. Afyare, Nin Hawiye ah oo aan magaciisu weli isoo gaadhin iyo rag kaloo badan. Markii xornimad Somalidu ka qaadatay mustacmaradihii Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay Soomaalidu gashay xilli kala guur ah. Soomalida oo nolosheedu ku salaysnayd dhaqanka reer-guuraannimo ee miyiga way yarayd dadka ku baraarugsanaa ahmiyadda xorriyada la helay taasaana dhalisay inay baylah noqoto oo dad dan aan xalaal-miirad ahayni ay dantooda gaarka ah ku qunsadadaan Dawladnimadii la helay.
:: Cali Banfas
Ma gudboona gaarida sare iyo gibirta naaxdaaye
Wuxu yidhi DHarbaaxo-jin
Masalooyinkaagii maxaa dheri ku meermeershey